बच्चा कसरि बस्दैन ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बच्चा कसरि बस्दैन ?
प्रायजसो धेरै महिलाहरु गर्भवती छु वा छैन् भन्ने कुराको बारेमा परिक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकी जान लाज मान्ने गर्छन् । त्यसकारण घरेलु तथा प्राकृतिक तरिकाबाट पनि गर्भवती भए नभएको सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।पछिल्लो समय अशुरक्षित यौ न स म्पर्कका कारण ग’र्भप’तन गर्ने किशोरीहरुको संख्या बढ्दै छ । शिक्षित भएर पनि बिना अस्थायी साधनको प्रयोग हुने यस्तो अशुरक्षित सम्पर्कले गर्दा किशोरी अवस्थाबाटै महिलाहरुमा समस्या हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महिलाले आफ्नो महिनावारीको समय ख्याल नगर्दा र भईपरी आउने समयमा अस्थायी साधनको प्रयोगले नहुनाले नेपालमा ग/र्भपतन गराउने किशोरीहरुको संख्या बढेको बरिष्ठ प्रसुती तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले बताउनु भयो ।एक अन्र्तवार्ताको क्रममा डा.शर्माले एक पटक पनि महिनावारी नभएकी १३ बर्षिय किशोरी समेत ग/र्भव/ती भएर आफुकहाँ आएको समेत बताउनु भयो । उहाँले किशोरीले बिशेष ध्यान नदिदाँ, पार्टनरको कारण यस्ता घटना हुने बताउनुभयो ।
यस्तै प्राचिन समयमा पनि गर्भवती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि गर्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।उहाँले क/ण्डम बिना कसैसंग पनि सम्पर्क गर्न नहुने बताउँदै यदी त्यसो गर्नुछ भने महिलाको महिनावारी चक्र हेरेर गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ । हेरौं डा. नुतन शर्मासंगको यो अन्र्तवार्ता